vfxAlert mobaylka app: ka ganacsiga isbeddelka | vfxAlert official blog
Mobile vfxAlert - faaiidada isbeddelka
Ku-ganacsiga isbeddelka ayaa had iyo jeer noqon doona ikhtiyaarka ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah ee ugu faa'iidada badan. Waxaad ku heli kartaa faa'iido labadaba kor u kaca iyo hoos u dhaca qiimaha. Aan aragno sida ay u shaqeyso istiraatiijiyad fudud ee Pocket Option iyo nooca mobilada ee vfxAlert .
Xulashada Jeebka sifooyinka xeeladaha ugu fiican :
Waqti xaddidan : Mid kasta oo ka mid ah inta u dhexeysa M1-M5. Xaaladeena, M1 ayaa loo isticmaalaa, laakiin iyadoo la kordhinayo muddada falanqaynta, saxnaanta calaamaduhu way kordhisaa.
Istaraatiijiyadu waxay isticmaashaa laba tilmaame oo farsamo :
Stochastic - oscillator-ku wuxuu qiimeyn doonaa dheelitirka hadda u dhexeeya iibsada iyo iibiyeyaasha: saadaalinta ka sarreysa heerka 80 - dhammaadka kor u kaca (la iibsanayo), ka hooseeya 20 - dhammaadka hoos u dhaca ( oversold).
Kooxda Bollinger (BB) . Tilmaamuhu wuxuu ka warbixiyaa jihada iyo isbeddelka isbeddelka hadda jira, iyo dhaqdhaqaaqa toosan ee xariiqyada ayaa muujin doona si siman - kiiskan, way ka fiican tahay inaad ka baxdo suuqa, gaar ahaan haddii qiimihiisu u socdo kanaalka cidhiidhi ah. Marka kala duwanaanshuhu si weyn u balaadhiyo, waxaad isticmaali kartaa calaamado daqiiqado dheer oo 10-15 ah waxaadna kordhin kartaa mugga wax kala iibsiga 10-15%.
Ka dib markii la rakibo tilmaamayaasha jaantusyada Xulashada Jeebka , waxaanu eegnaa tusaalooyinka calaamadaha:
Calaamadaha ganacsiga ee ku jira abka dilaaliinta ee Pocket Option :
WAC - ikhtiyaar . Qiimuhu wuu ka sarreeyaa Bollinger-ka ama wuxuu ka soo baxaa hoosta. Stochastic wuxuu ka sarreeyaa heerka 80 ama kor ayuu u kacay.
PUT - doorasho . Xaaladaha ka soo horjeeda: qiimuhu wuxuu ka hooseeyaa khadka Bollinger ama wuxuu ka gudbaa kor ilaa hoos. Stochastic waa ka hooseeyaa heerka 80 ama waa la diiday.
Calaamaduhu waa sahlan yihiin, laakiin kuwa bilawga ah waa inay hubaal sugaan xaqiijinta isbeddelka ama dib u noqoshada qiimaha Stochastic. Gaar ahaan marka la isticmaalayo Pocket Option ganacsiga nuqul ka mid ah . Waxaan ka ganacsaneynaa fursadaha dib-u-soo-kabashada 3-5 shumac ka dib bilawgeeda; Hubaal waxaan sugi doonaa dhammaan khadadka BB inay dib u noqdaan.
The "cidhiidhi ah" kanaalada qiimaha Bollinger Bands, sare u qaadida suurtagalnimada dhaqdhaqaaq xoog ka dib dhamaadka guriga. Xaaladda ka soo horjeeda ayaa lagama maarmaan u ah ganacsiga cirifka xuduudaha: marinku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 30-40 dhibcood; haddii kale, doorashooyinku waxay noqon doonaan kuwo aan faa'iido lahayn, xitaa haddii calaamadaha PocketOption ay muujiyaan jihada saxda ah;
Inta ay sii dheeraato dhaqdhaqaaqa dhinaca dhinac ee kooxda Bollinger Bands ayaa sii socda, way sii kordheysaa suurtogalnimada isbeddel xooggan ka dib marka la dhammeeyo. Xaaladahan oo kale, waxaad furi kartaa ganacsiyada calaamada ugu horeysa ee dib u noqoshada Stochastic iyo calaamadaha xooggan ee vfxAlert iyo Istaraatiijiyada Pocket Option ;
Inta lagu jiro daabacaadda wararka muhiimka ah iyo tirakoobyada, ma furno xulashooyinka 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddar leh waxay xiri karaan heshiisyada hadda jira.
Haddii PocketOption ay suurtogal ka dhigto in la xiro ikhtiyaarka ka hor taariikhda dhicitaanka, markaa waxaan hubaal hagaajin doonaa heshiiska (xitaa haddii ay faa'iido leedahay!) Marka calaamad ka soo horjeeda ay muuqato - soo noqnoqoshada soo noqnoqda ee qiimaha Bollinger Bands ama dib u celinta Stochastic degdeg ah .
Istaraatiijiyadu waa nidaam madax-saarid muxaafid ah oo si cadaalad ah loogu kalsoonaan karo si loo helo faa'iidada xasilloon ee dallaalka ikhtiyaarka Jeebka . Halbeegyada aaladaha ganacsiga waa la bedeli karaa iyadoo ku xiran isbeddelka hadda jira. Waxaan mar kale ku xasuusineynaa in calaamadaha ugu faa'iidada badan ee ikhtiyaarrada binary ay noqon doonaan oo kaliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan waxaan ka sii saarnaa suuqa!